निःस्वार्थ सेवामा जुटेको 'कोलाबोरेटिभ्स'
शेरबहादुर ऐर शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७, १८:१७
धनगढी- ‘आउनुहोस्! आउनुहोस्! हाम्रो यहाँ खानाको व्यवस्था गरिएको छ। घर परिवारसँग सम्पर्क गर्नका लागि टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ,’ बिहीबार माइकमा 'रोयल कोलाबोरेटिभ्स'का संयोजक गजेन्द्र शाही कञ्चनपुरको डोकेबजारमा आवाज लगाइरहेका थिए।
भारतबाट फर्किएकाहरूका लागि रोयल कोलाबोरेटिभ्स नामक समूहले निःशुल्क खाना तथा पानी खुवाउन जेठ ९ गतेदेखि कञ्चनपुरको डोकेबजारमा क्याम्प स्थापना गरेको छ।
भारतबाट कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै आएका नेपालीहरूका लागि प्रदेश सरकारले खाना तथा बासको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि जनस्तरबाटै सहयोग गर्ने उद्देश्यले २१ दिनदेखि सो समूह सहयोगमा जुटेको हो।
डोकबजारमा डोरीले सीमाना बनाएर खाना तथा खानेपानी वितरण भइरहेको छ। सो समूहले सामाजिक दूरी कायम गर्दै उनीहरूका लागि खाना र पानीको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
'भारतबाट फर्केका सुदूरपश्चिमबासीहरू भोकै बस्न बाध्य भएको सुनेपछि हामीले यो सानो प्रयास गरेका छौं,' समूहका संयोजक गजेन्द्रले भने, 'उनीहरूले २१ दिनदेखि शुरु गरेको खाना तथा पानी वितरण कार्यमा विभिन्न संघ/संस्था र व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।' उनले शुरुमा दुई/तीन जनाको सहयोगमा शुरु गरेको क्याम्पमा अहिले सहयोगी हातहरू थपिदै गएको बताए।
समूहका सदस्य देवेन्द्र जोशीले अहिलेसम्म ५८ हजार प्लेट खाना वितरण गरिसकेको जानकारी दिए। 'हामीले प्लेटको हिसाब राख्छौं,' उनले भने, 'त्यसका आधारमा ५८ हजार प्लेट गएको देखिन्छ।' उनले विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट नगद नभई रासनमात्र सहयोग लिने गरेको बताए।
उनका अनुसार अहिलेसम्म सिएनएन हिरो २०१५ न्यागी डोयन, रुडुकका संस्थापक आरजु राणा देउवा, निसर्ग अस्पताल र अस्पतालका संचालक तीर्थ पन्त, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सहनिर्देशक नितेश कनौडियाको टिम र कलेज, टेक बोगटी, अनिल भुजनिया, धनगढी उपमहानगरपालिका लगायतले सहयोग गरेको छ।
गजेन्द्र र देवेन्द्रसंगै सो समुहका दिनेश शाह, इन्द्र विनाडी, रचित शाह सेवामा खटिएका छन्। देवेन्द्रले भने, 'शुरुमा हामीलाई सहयोग गर्न पनि कोही आएका थिएनन्। इन्द्र, दिनेश र रचितको साथ र सहयोगले थप मद्दत पुग्यो।'
उनीहरू अहिले भारतबाट आएका सुदूरपश्चिमबासीलाई खाना खुवाउँदा एकदमै खुशी देखिन्छन्। 'हामीले चर्चा पाउन यो काम गरेका होइनौं। हामी यस प्रदेशवासीका हरेक समस्यामा सहयोग गर्न अघि बढ्छौं,’ गजेन्द्रले भने।
कोलाबोरेटिभ्स समूहले कोरोना महामारीकै समयमा रक्तदान, विद्यार्थीहरूलाई राहत, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाका लागि खाद्यान्न सहयोग लगायतका गतिविधि गरेको छ। १० दिनसम्म सञ्चालन गरिएको रक्तदानमा एक सय ५४ बढीले रक्तदान गरेका छन्। उनीहरूले एक सय ५७ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई चामल, दाल, अण्डा, नुन, तेल, आलु वितरण गरेका थिए भने चार सय विद्यार्थीहरूलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरेका थिए।
कोलाबोरेटिभ्सले डोकेबजारमा निःशुल्क खाना तथा पानी वितरण गर्न लागेपछि धनगढी फाउन्डेसनले पनि त्यसको चार दिनपछि कर्भडहलमा भान्सा सञ्चालन गरी डोकेबजारमा खाना वितरण गर्न शुरु गरेको थियो।
दिदीबहिनी महिला समूह युकेको पनि सहयोग
दिदीबहिनी महिला समूह यूकेले कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट नेपाल भित्रेका नेपाली नागरिकहरूलाई एक हप्तासम्म खाना खुवाउने भएको छ।
भारतबाट मजदुरी गरी आएका नेपाली नागरिकहरूले लकडाउनका कारण भोकभोकै आएपछि सीमामा निःशुल्क खाना खुवाउदै आएको रोयल कोलाब्रोटिम्भसमार्फत एक हप्तासम्म खाना खुवाइने भएको हो।
दिदीबहिनी महिला समूह यूकेले पहिलो चरणमा एक लाख ३० हजार बजेट पठाएपछि नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलको पहलमा खाना खुवाउने काम सुरु भएको हो।
डाक्टर रावलले दिदीबहिनी महिला समूह यूकेलाई कोरोनाको महामारी भएको समयमा युकेमा भएका दिदीबहिनीहरूले पठाएको पैसामा करिब ८ हजार नेपाली नागरिकलाई खाना खुवाउन सकिने बताए। खाना खुवाउने सहयोग सुरुवातदेखि लागिरहेको रोयल कोलाबोरेटिभ्सका युवाहरूले गर्नेछन्।